FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #75
Is FSX/FSX: SE xanuun? Ma waxbaa sax ah? Halkani waa meesha la iska weydiin karo dhibaatooyinkaaga farsamo! Ha ahaato kutaan, diyaarado, iskumid, iyo waxkastoo ...
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #101
nooca arrimaha aad aqrinayo?
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #113
markaan bilaabo fsx, Waa inaan iska daayaa farriimaha: qaladka ah bilowga bilowga ee Concorde british, iyo khaladaadka 2 muuqaal. Sideen ku xallin karaa 3daas dhibaatooyin?
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #115
Rolando wuxuu qoray: markaan bilaabo fsx, Waa inaan iska daayaa farriimaha: qaladka ah bilowga bilowga ee Concorde british, iyo khaladaadka 2 muuqaal. Sideen ku xallin karaa 3daas dhibaatooyin?
Waan hubaa, waxa fariin qalad aad hesho ma ihi, laakiin waxa ay ku dhow u muuqataa sidii aad leedahay nuqulo tiro badan oo diyaaradda lagu rakibay. Soo saarida 1 iyaga ka mid ah xal u lahaa in.
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #118
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Waan hubaa, sida loo sameeyo in aan ahay. Aan ku sameeyey mar kale dhowr miridh Conncords ah, laakiin rakibayo ma sax saar version rakibay ka hor inta ku rakibidda cusub. Dhibaatada waxa ay tahay isku mid. Ama aad u malaynayso in waa in aan deinstall Concords gebi ahaanba ka dibna dhowr miridh?
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #119
Rolando qoray: Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada. Waan hubaa, sida loo sameeyo in aan ahay. Aan ku sameeyey mar kale dhowr miridh Conncords ah, laakiin rakibayo ma sax saar version rakibay ka hor inta ku rakibidda cusub. Dhibaatada waxa ay tahay isku mid. Ama aad u malaynayso in waa in aan deinstall Concords gebi ahaanba ka dibna dhowr miridh?
Waxaan ka saari lahaa galka 'Concorde' s gebi ahaanba, rar FSX Eeg haddii ay ku siiso farriintaas, iyo HADDII aysan helin, ka dibna rakib oo arag waxa dhaca.
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #120
Waad ku mahadsan tahay in aad fikrado. Waxaan sameeyay kuwa soo socda:
- tirtiraan gunaanadyada gabi ahaanba (kumana muuqan fsx), laakiin farriintu waxay ahayd isku mid!
- i sidoo kale isku dayay in la bilaabi kombiyuutarka, laakiin isku mid ah fariin
- i bixi concordes cusub oo iyaga lagu rakibay, fariin isku mid ah
La yaab leh, ma? Waxaan anahay og tahay sidii aan tirtiri kartaa fariin in qalad ah.
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #122
Ma fiirisay in folder Diyaaradaha si loo hubiyo in ay tahay tii hallowday?
(In AAN kiiska, waa B: \_ Program Files (x86) \_ Games Microsoft \_ Microsoft Flight Qabille X \_ SimObjects \_ diyaaradaha)
Kale oo aan ahayn in aan sameeyo ma garanayo waxa ay tahay in aad u sheegto.
aad dhejin kartaa shaashadda ka mid ah qaladka? in laga yaabo in Me caawin yara.
btw .. mahad dulqaadashadiinna in this. Waan ogahay in aad u badan tahay oo keliya sida niyad (HADDII aan ka sidaas) Me ka badan tahay. Wax aan ka badan alaabtayda oo neceb aan shaqayn.
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #133
Fariintu waa af Jarmal (waxaan ahay Swiss), waxay si sax ah u tahay: qalad ku bilaawida qoraalka bokishka. laakiin dhibaato weyn maahan sababta oo ah diyaaradaha ayaa si buuxda u duulaya. waxaan kaliya haystaa dhagsii dheeraad ah markii aan bilaabo fsx...
aad si, mahad aad u badan tahay caawimada. haddii aad leedahay lahaa xal ka dib, fadlan ila soo xiriir.
Rolando, ku nool dalka Switzerland in Thailand ...
FSX/FSX: SE Dhibaatooyinka farsamada sano 3 5 bilood ka hor #134
Waa kuwee Concorde yahay? waa mid ka mid aad halkan ka helay?
sida tahay in Jarmal, oo aan noqon lahaa dhibaato lol waxaan ka helay saaxiib ku hadla si fiican Jarmal ^ _ ^